Isidleke esikhulu saseHwangtobang - I-Airbnb
Isidleke esikhulu saseHwangtobang
Baekhak-myeon, Yeoncheon, Gyeonggi Province, i-South Korea
Impesheni ibungazwe ngu-시동
U-시동 Ungumbungazi ovelele
Njengempesheni ye-Gwituljip Hwangto Gudeul, eyakhiwe ngokucophelela nge-loess enempilo kanye nezihlahla zikaphayini.
Leli yigumbi lendabuko laseKorea le-ondol elishiswe ngomlilo wezinkuni ze-oki.
Kunconywa njengesipho sokuzinikela komntwana nabazali.
U-Ondol Gudeulbang usebenzisa izinkuni eziko
Awukho umbhede Ukusebenzisa umatilasi (iphedi)
I-Sculpture Park Seokjang-ri Art Museum, etholakala ku-3km ngaphansi kwe-Tunnel 1 esenyakatho kakhulu, yavulwa ngo-1999 nge-Civil Control Line Art Festival. Ayisebenzisi noma yimuphi umquba wamakhemikhali noma izibulala-zinambuzane, futhi ungakwazi ukuzwa injabulo yenkathi ngemvelo ngemisebenzi yobuciko.
U시동 Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Baekhak-myeon, Yeoncheon namaphethelo